Art is My Life: 2008
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ အသက်ငါးနှစ်အရွယ်မှာ သာနာ့ဘောင်ကို သူဝင်ခဲ့ရတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ သာသနာမှာ မပျော်ပိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူထွက်ပြီး အိမ်ထောင်ပြုတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်ကုန်သွားပြီး ဇနီးချောလေးနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ထားခဲ့ပြီး သာသနာ့ဘောင်ကို ပြန်ဝင်သွားတယ်။ ဇာတ်လမ်းနာမည်က SAMSARA တဲ့။
တာရှီလို့ အမည်ရတဲ့ လားမား တစ်ပါးဟာ အသက်ငါးနှစ်အရွယ်ကတည်းက သာ့သနာ့ဘောင်ကို ၀င်လာပြီး အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူသူမရှိတဲ့ လှိုင်ဂူကြီးတစ်ခု ထဲမှာ သုံးနှစ်သုံးလနဲ့သုံးရက်တိတိ ဂူပိတ်တရားကျင့်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် လားမာခေါင်းဆောင်ပေးတဲ့ အထွဋ်အမြတ်ဆုံးဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပျော်ပိုက်ဘူး ဒါကြောင့်သူ လူထွက်ခဲ့တယ်။
အခုလို သုံးနှစ်လုံးလုံး ဂူပိတ်တရားကျင့်ခဲ့ပြီးမှ ဘာကြောင့်လူထွက်ရလည်း ဆိုတာတာ သူ့မှာ ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက် ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်ကို ပေါ်လွင်အောင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
ပြီးတော့သူလူထွက်တယ်။ ယေက္ခမရဲ့ ယာလုပ်ငန်းကို ၀င်လုပ်တယ်။ ယာလုပ်ငန်းမှာလည်း သူအောင်မြင်ခဲ့သလို သူ့လက်ထက်မှာ စီးပွားလည်းပိုပြီး ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်။ သူ့မိန်းမကိုလည်း သူဟာတော်တော်လေး ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကလေးတစ်ယောက်လည်း မွေးဖွားခဲ့တယ်။ သူက သူ့မိန်းမကိုချစ်တယ် ဒါပေမယ့် သူဟာ ယာထဲမှာ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်နဲ့ ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်။
မိန်းမနဲ့ ကလေးကို ချစ်လျှက်နဲ့ ဘာကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်လဲ ဆိုတာကို အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံအောင် ရိုက်ကူးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာ မိန်းမရယ် ကလေးရယ် သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ယာခင်းတွေရယ် အားလုံးစွန့်ခွါပြီး သာနာ့ဘောင်ကို ပြန်ဝင်သွားတယ်။ သူ့ကို ဘယ်အရာတွေ သာသနာ့ဘောင်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာလဲ ဆိုတာကို သိရဖို့ အဲဒီကားလေးကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းဟာ တိဘက်ဒေသကို အခြေခံပြီး ဂန္ဒာရပတ်ဝန်းကျင်းရှုမျှော်ခင်းတွေပါ ပေါ်လွင်အောင်ရိုက်ကူး ထားတာကြောင့် အပြက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီး အပြောက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ပါဝင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရိုက်ကူးရာမှာလည်း မြန်မာကားများမှာလို နေ့ဖြစ်ဖြစ်ညဖြစ်ဖြစ် လူရုပ်တွေ အကုန်လင်းအောင် မီးထိုးပြီး ရိုက်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ လင်းသင့်တဲ့ အချိန် လင်းသင့်နေရာမှာ လင်းပြီး မှောင်သင့်တဲ့အချိန် မှောင်သင့်တဲ့ နေရာမှာ အမှောင်ထားပြီး ရိုက်ကူးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အကယ်ဒမီပေးပွဲက စကားကို ငှားပြောရရင်တော့ အလင်းနဲ့အမှောင် အရောင်နဲ့ အရိပ်ကို သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကြည့်ရသူ အဖို့ ပိုပြီး မျက်စိပသာသ ဖြစ်စေပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီဇာတ်ကားကို မြန်မာတွေသာ ရိုက်ရင် သမက်ရောက်လာပြီးမှ စီးပွားတက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ရွာထဲမှာရှိတဲ့ မိန်းမကြီးတွေနဲ့ တကျော်ကျော် အတင်းပြောတဲ့ အခန်းတွေကို ဝေေ၀ဆာဆာ ထည့်ပြီး ရိုက်ကြဦးမှာ မြင်ယောင်မိပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ အစအဆုံး အတင်းပြောတဲ့ အခန်း တစ်ခန်းမှ မပါဘူး။ (ကြုံလို့ ပြောရဦးမယ်ဆိုရင် ကုလားကား ကြည့်ရင် ကတဲ့အခန်း မပါပဲမနေသလို မြန်ကားကြည့်ရင်လည်း အတင်းပြောတဲ့အခန်းက မပါပဲကို မနေနိုင်ကြပါဘူး။)
အိမ်ထောင်ရေးကို စိတ်ကုန်သွားလို့ အိမ်ကနေ တိတ်တိတ်လေး ထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ သူဆက်သွားမဲ့ အရှေ့အတည့်တည့်မှာ မိန်းမက မြင်းနဲ့ကြိုပြီး ရောက်နေနှင့်တယ်။ အဲဒီအခန်းလေးကတော့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံး အမြင့်ဆုံး ဇာတ်ရှိန်ပါပဲ။ အဲဒီနေရာမှာ စကားလုံးတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ သိပ်သုံးမနေပါဘူး။ ယေကျာင်္းတစ်ယောက်က မိန်းမနဲ့ ကလေးကို စွန့်ပစ်ပြီး သာနာ့ဘောင်ကို ၀င်တော့မယ့်အခါမှာ မိန်းမဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို၊ ဥပမာလေး တစ်ခုပြောပြီး သူ့ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မကတော့ အထီးကျန်တော့မှာပဲ၊ ကျွန်မ၀မ်းနည်းတယ် ကျွန်တော် ခံစားရတယ် အစရှိတာတွေကို ပြောနေဖို့ မလိုပဲ အဲဒီဥပမာလေးနဲ့တင် သူဘယ်လောက် ၀မ်းနည်းရမယ်ဆိုတာကို ပေါ်လွင်သိရှိ ခံစားသွားနိုင်ပါတယ်။
ဆက်ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပါပဲ။ ကောင်းတာကတော့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ကြပါ။ ဒါပေမယ့် အချို့သော အခန်းလေးတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျော်ရပါလိမ့်မယ့်လို့ ပြောကြားရင်း ….
သြော်မေ့နေလို့ ဇာတ်ကားကို ၀ယ်မရဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ လာယူပါ။ တစ်ခွေ တစ်ထောင်။ အဲဒီတစ်ထောင်ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်ယူထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပေးမှာပါ။ ဟဲဟဲ စတာပါ မိန်းမလည်းမရှိသေးပါဘူး။ ၀ယ်မရရင် ယုဇနပလာ ဒီဗီဒီ တန်းကိုသွားပါ။ မြန်မာပြည်ကို ရောက်သမျှ ခွေအားလုံးနီးပါ ၀ယ်လို့ပါတယ်လို့ ပြောကြားရင်း …………….
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 4:59 PM 8 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
အပေါ်ဆုံးပုံကတော့ ရိုးရိုး ရိုက်ထားတဲ့ပုံ
အောက်က နှစ်ပုံကတော့ နေကိုကြယ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ထားတဲ့ပုံ
နေကိုကြယ်ဖြစ်အောင် ဖိုတိုရှော့သုံးစရာမလိုပဲ ကင်မရာနဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုရိုက် ဖို့အတွက် နေရောင်ဟာ အားကောင်းဖို့တော့လိုပါတယ်။ နေရောင်အရမ်းမှိန်လွန်းနေရင် ကြယ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ များသောအားဖြင့်တော့ နေကြီးသက်သက်ကြယ်ဖြစ်အောင်ရိုက်ရုံနဲ့ ဓာတ်ပုံက အနုပညာမြောက်တဲ့ ပုံတစ်ပုံဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေရဲ့ အရှေ့မှာ Subject လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ရိုက်ကူးမဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုရှိနေဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။
Subject တစ်ခုကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ခံနေလုံးကြီးက လင်းလွန်းနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဒီတိုင်းကြီးလင်းနေတာထက် ကြယ်လိုပုံစံမျိုး အလင်းဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးကြတာများပါတယ်။
ရိုက်ကူးမဲ့ ကင်မရာဟာ အလင်းတံခါးကို 22 ကျော်တဲ့အထိ ကျဉ်းပေးထားပါ။ Exposure မီတာကိုတော့ နေကိုချိန်ပြီး တိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က Subject ကိုတိုင်းထားရင်တော့ အရမ်းလင်းသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် နေဟာကြယ်ဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Shutter Speed ကိုတော့ Exposure မီတာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ခါတိုင်းရိုက်ကူးနေကျအတိုင်း ထားရင်ရပါပြီ။ အဲလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း အလင်းတံခါးကို 22 အကျော်မှာ ကစားကြည့်ပြီး Shutter Speed ကို အော်တိုထားရိုက်ရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
တစ်ခုရှိတာက နေရောင်ကို ကင်မရာမှန်ဘီလူးအတွင်းထဲကို တိုက်ရိုက်ပေးဝင်ရတာ ဖြစ်တာကြောင့် အခန့်မသင့်ရင်တော့ ကင်မရာ ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:11 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 3:06 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
GSM ဖုန်းမှာ Voice Message ပို့လို့ရပြီ
အခု GSM ဖုန်းတွေမှာ Voice Message ပို့လို့ရပါပြီ။ Voice Message ကို 5
နဲ့ တဲ့ဖုန်းတွေကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ 011 ကို အရှေ့မှာခံရပြီး2နဲ့
စတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ 021 ကိုအရှေ့မှာခံရပါတယ်။ ဥပမာ 0951******
ကိုပို့မယ်ဆိုရင် 01151******* လို့နှိပ်ပြီး ခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။
0920******* အစရှိတဲ့ ဖုန်းတွေကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ 02120********
လို့နှိပ်ပြီးခေါ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အသံသွင်းချိန်ကတော့ စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက်ပဲ
Voice Message ကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တော့ 155 ကိုခေါ်ပြီး နားထောင်ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အသံ Message ကိုနားထောင်တဲ့လူက ပိုက်ဆံကုန် မကုန်လည်း
မသိသလို တစ်ခါပို့ရင် ဘယ်လောက်ကျလဲ ဆိုတာလည်း မသိပါဘူး။ သိချင်ရင်တော့
စုံစမ်းရေးဌာန 100 ကိုနှိပ်ပြီး မေးကြည့်လိုက်ပေါ့။ :P
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:08 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
နောင်ချိုက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ရိုက်လာတာ
ပဲခူးတိုင်း သနပ်ပင်မြို့နယ် မင်းရွာ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:55 PM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ဆောင်းနေကလဲ ၀င်တာမြန်ပ တံတားပေါ်တက်နေတုန်းရှိသေးတယ် ဖြုတ်ဆို ၀င်သွားတယ်။ ပုံတောင် သိပ်မရိုက်လိုက်ရဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:05 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မက်မန်းသီးပင်ရဲ့ ထွက်ခါစ အရွက်လေးနှစ်ရွက်ပါ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:51 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 5:27 PM
အဲဒီနေရာကို သွားချင်ရင် အရင်ဆုံးဖြတ်သန်းရာမှာက ကျားပါးစပ်ချောက်ကမ်းပါးကြီးပဲ။ ကွေ့သွားလို့မရဘူး မဖြစ်မနေဖြတ်ရမယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ကျားပါးစပ်တွင်းကို မြင်ရုံနဲ့ ကူးလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး ပြန်လှည့်သွားကြတယ်။ တချို့ကတော့ အထဲကို ပြုတ်မကျအောင် သတိထားပြီး နုတ်ခမ်းပေါ်က လမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ တံတားထိုးပြီး ကျော်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဘာမှစဉ်းစားမနေဘူး တွေ့တာနဲ့တခါတည်း ဒိုင်ပင်ထိုးချလိုက်တယ်။
အဲဒီကျားပါးစပ်ကို ဖြတ်မိပြီဆိုရင်တော့ နုတ်ခမ်းပေါ်ကနေ သတိထားပြီးပဲ လျှောက်လျှောက် တံတားထိုးပြီးတော့ပဲသွားသွား သတိလက်လွတ်သွားရင် သို့မဟုတ် ကံမကောင်းရင်တော့ ကျားပါးစပ်တွင်းထဲ ပြုတ်ကျသွားတာပဲ။
ကျားပါးစပ်တွင်းထဲသို့ ကျသွားပြီးနောက် ကူးရင်ခတ်ရင်း တစ်ဘက်ကို ရောက်သွားကြသူများရှိသလို ၊ ကျားပါးစပ်တွင်းမှာ မရုန်းထွက်နိုင်ပဲ နစ်မြုတ်သွားကြသူများလည်း ရှိလေရဲ့။
ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ် စကားပြော သင်တန်းတစ်ခုကို တက်စဉ်ကဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သင်တန်းဆိုသည့်အတွက် ထုံးစံတိုင်း အတန်းသားအချင်းချင်း အသက် နေရပ် ၀ါသနာ အစရှိတို့ကို အပြန်အလှန်မေးကြ ဖြေကြရသည်။ အများစုကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး ဖြစ်ချင်ကြသည်ဟု ဖြေကြပြီး ဆေးကျောင်းတက်နေသူများက ဆရာဝန်၊ ကွန်ပျူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အစရှိသဖြင့် ဖြေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုထဲမှာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဖြစ်လိုသည်ဟု ဆိုသည်။
ကျွန်တော်ကလည်း ၀ါသနာပါသူ ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ရက်များတွင် သူနဲ့ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများအကြောင်း မြန်မာကားများ မကောင်းကြောင်း ကိုးရီးကားများသည် အလွန်ရှည်လွန်းကြောင်း အစရှိသဖြင့် တစ်နေ့တစ်မျိုးပြောဖြစ်ကြသည်။ ဒီလိုနဲ့ သူနဲ့ကျွန်တော် တော်တော် ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်သွားသည်။ ခင်သွာတော့မှ သူ့အကြောင်းကို သိရသည်။ သူက ဆယ်တန်းအောင်ကတည်းက မော်ဒယ်သင်တန်းတွေတက်ပြီး မော်ဒယ်လည်းလျှောက်ခဲ့ဖူးသည်။ ဗီစီဒီ နှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်လောက်လဲ ရိုက်ခဲ့ဖူးသည်။ မဂ္ဂဇင်း စာစောင်အချို့မှာလည်း ပါခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော်ယခုအခါတွင် အိမ်က ခွင့်မပြုတော့သည့်အတွက် ထိုအလုပ်အားလုံးကို ရပ်နားလိုက်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
အစပိုင်းကတော့ ခွင့်ပြုပြီး နောက်ပိုင်းကျတော့ ဘာဖြစ်လို့ ခွင့်မပြုတာလည်းလို့ သူ့ကို မေးကြည့်တော့
“ အစပိုင်းတုန်းကတော့ အမေက ငါ့နောက်ကို တောက်လျှောက် လိုက်နိုင်တယ်လေ။ နောက်ပိုင်းကျတော့ အမေလည်း ကျမ်းမာရေးသိပ်မကောင်းတော့ မလိုက်နိုင်တော့ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာ” ဟုသူက ဆက်ပြောသည်။
သူက ရုပ်ရည်းလည်းရှိသည်။ သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေကလည်း သွက်သွက်လက်လက်ရှိသည်။ ဒီအလုပ်ကို သူဆက်လုပ်ပါက အောင်မြင်မည်ဟု ထင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က
နင်ကလဲ အမေ မလိုက်ပေးတော့လည်း ဘာဖြစ်လဲဟ ကလေးမှ မဟုတ်တာ အဆက်အသွယ်လည်း ရနေပြီပဲ ဆက်လုပ်ပေါ့ ဟု ကျွန်တော်က ပြောလိုက်မိသည်။ ထိုအခါတွင် သူမက …
အေးငါလည်း အရင်ကတော့ အဲလိုပါပဲ အမေမလိုက်နိုင်လည်း ငါဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီး အမေကိုပြောတယ်။ အဲဒီတော့ အမေက ဘာပြောလဲသိလား
ငါ့သမီး ယေကျာင်္းကောင်းကောင်းမရပဲ နေလိမ့်မယ်တဲ့
သူအမေက အဲလိုပြောသည့် စကားကို သေချာစဉ်းစားကြည့်ပြီး ၀ါသနာပါလျှက် ဆက်မလုပ်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟုဆိုသည်။ သူကတော့ ကျားပါးစပ် ချောက်ကို ကြောက်လို့ နောက်ပြန်လှည့်ခဲ့သူ။
အကြောင်းအရင်းတွေ တိုက်ဆိုင်လို့ ကျွန်တော် ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို လောကထဲတွင် ၀င်တိုးတော့ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းများရလာသည်။ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းများနှင့် သင်တန်းတက်လိုက် ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေရိုက်ကြည့်လိုက်နှင့် တော်တော်လေး တွဲဖြစ်ကြသည်။ နောက်တော့ ကျွန်တော်နယ်ပြန်တာနှင့် နာဂစ်ဖြစ်သည်နှင့်တို့ကြောင့် သုံးလေးလလောက် ကျွန်တော်သူတို့နှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။
တစ်ရက်တွင် သူငယ်ချင်းများထဲမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့် ကျွန်တော်လမ်းမှာ မထင်မှတ်ပဲ ဆုံမိသည်။ ကျွန်တော်က နင်ဇာတ်ကားတွေ ဘာတွေတောင်ရိုက်နေပြီဆိုဟု မေးတော့။ သူက အေးဟုတ်တယ်ဟု ဖြေသော်လည်း သူ့အသံမှာ သိပ်အားမရှိလှ။ ဘယ်ကားမှာ ဘယ်သူနဲ့ရိုက်လဲ ဘာလည်း အဲဒီခွေထွက်နေပြီလား အစရှိသဖြင့် ကျွန်တော်က ဆက်မေးတော့ မထွက်သေးပါဘူးဟာဟုသာ ဖြေသည်။ နောက်တော့ သူလည်း သွားစရာရှိသည် ကျွန်တော်လည်း သွားစရာရှိသည်မို့ စကားအကြာကြီး သိပ်မပြောဖြစ်ကြပဲ နောက်မှ အေးဆေးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟု သာပြောပြီး လမ်းခွဲခဲ့လိုက်ကြသည်။
နောက်ထပ်ကျွန်တော် သူနဲ့ထပ်တွေ့တော့ ထမင်စားရင်း စကားတော်တော်ကြာကြာ ပြောဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်လည်း သူပြောပြတော့မှတော့မှ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရမည့် လောကထဲက အတွင်းရေးများအကြောင်း တော်တော်စုံစုံလင်လင် သိလိုက်ရသည်။
အဲဒီလူကြီးက အသက်ကြီးပြီး မျက်မှန်တပ်ထားတယ်ဆိုတယ် ငါ့ခြေသလုံးက အမာရွတ်ကိုတောင်မြင်တယ် မြင်ရင်လည်း အသာအေးအေးမနေဘူး အဲဒီအမာရွတ်က ဘာဖြစ်ထားတာလဲလို့ လာမေးသေးတယ်။
ဟုအစချီပြီး ကျွန်တော်တို့နှင့် မတွေ့ဖြစ်သည့် သုံးလေးလအတွင်းမှာ သူတွေ့ကြုံခဲ့ရသည်များကို ပြန်ပြောပြသည်။ နောက်ဆုံးနိဂုံးကတော့ သူ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေပြီဟု ဆိုသည်။ ထိုဒါရိုက်တာ အမည်ကို မေးကြည့်သောအခါ ကျွန်တော်ထိုနာမည်ကို တစ်ခါမှ ကြားဖူးခြင်းမရှိ။
“ ဒီလိုပဲပေါ့ဟာ အနေနီးစပ်တော့ ဖြစ်သွားတာပေါ့” ဟု သူက ခပ်အေးအေးပင်ပြန်ပြောသည်။
သူကတော့ ကျားပါးစပ်နုတ်ခမ်းမှ လမ်လျှောက်ရင်း ခြေချော်ကျသွားခဲ့ပြီ။
သူကတော့ ငါ့ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရှားပါတယ်။ သူနဲ့ဇာတ်ကားဆက်ရိုက် ဖို့ကျတော့ သမီးရည်းစားဖြစ်နေတော့ ငါက သူဟောက်ရင် မကြိုက်ဘူးဟ။ သူကလည်း အလုပ်ထဲမှာ ဟောက်သင့်ရင် ဟောက်ရမှာပဲလေ အဲဒီတော့ ရိုက်ရတာ အဆင်မပြေမလို့ မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။ တခြားဒါရိုက်တာနဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုတော့လည်း သူကငါ့ကို စိတ်မချဘူး။ အဲဒီတော့ လောလောဆယ် တော့ငါလည်း ဘာမှ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး။
ရိုက်ကွင်းတွေဘာတွေမှာ လိုက်သွားရင် သူနဲ့ရိုက်ရတဲ့ ဆော်တွေက ငါ့ကိုကြည့်တဲ့အထာကို ငါမကြိုက်ဘူး။ ပြီးတော့ ငါ့ဘဲနဲ့ သူတို့နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကိုလဲ ငါမကြိုက်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်တော့ ရိုက်ကွင်းတွေကို သိပ်မလိုက်ဖြစ်တော့ဘူး တွေ့ချင်ရင်အပြင်မှာပဲတွေ့တယ်။ သူကိုလည်းပြောထားတယ် ရှုပ်ချင်ရင် ငါမျက်စိကွယ်ရာမှာရှုပ် ငါ့အရှေ့တော့လာမရှုပ်နဲ့လုိ့။ ငါက မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူး တစ်ချို့ဆော်တွေက ဇာတ်လမ်းမှာ ပါရရင်ပြီးရော ဒါရိုက်တာကို ဘာလုပ်ပေးရပေးရ ဆိုပြီး အသေကပ်ကြတာလေ။
သူပြောတဲ့ ကောင်မလေးတွေကတော့ ကျားပါးစပ်ထဲ ဒိုင်ပင်ပစ်ဝင်သူများ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
တစ်ခါတုန်းက ရေထဲတွင် လက်ပံတုန်းကြီး မျှောပါလာသည်။ ထိုလက်ပံတုန်းကြီးနောက်က ဗေဒါပင်အုပ်ကြီး မျှောလာသည်။ လမ်းတစ်နေရာအရောက် ဗေဒါပင်အုပ်ကြီးက လက်ပံတုန်းကြီးကို လမ်းဖယ်ပေးဖို့ ပြောသည်။ ထိုအခါ လက်ပတ်တုန်းကြီးက ဘာဖြစ်လို့ လမ်းဖယ်ရမှာလဲ ငါကမင်းတို့အရှေ့ကနေ ရောက်နေနှင့်တာပဲဟု ပြောသည်။ ထိုအခါ ဗေဒါအုပ်က မြစ်ထဲမှာ စည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ ပိုရှုပ်တဲ့သူကို ဦးစားပေး လမ်းဖယ်ပေးရမယ်လေ လို့ပြောတော့ လက်ပံတုံးကြီးလည်း လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရသည်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဗေဒါအုပ်က မြစ်အလည်မှာ မင်းမှုပြီး စီးမျှောနေတုန်း အနောက်မှာ ဒိုက်ပုံတွေ လိုက်လာသည်။ ဒိုက်ပုံတွေ ဗေဒါအုပ်ကို လမ်းဖယ်ခိုင်းသည်။ ဗေဒါအုပ်ထက် ဒိုက်ပုံက ပိုရှုပ်တာကြောင့် ဗေဒါအုပ်က လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရသည်။ ဒိုက်ပုံက ဗေဒါအုပ်ကို ကျော်တက်ပြီး မြစ်အလည်ခေါင်မှာ ဆက်မျှောနေခဲ့သည်။ တော်တော်လေးကြာတော့ ဒိုက်ပုံအနေက်က သပွတ်အူ လိုက်လာပြီး လမ်းဖယ်ခိုင်းသည်။ ဒိုက်ပုံသည် သပွတ်အူလောက် မရှုပ်နိုင်သဖြင့် မြစ်အတွင်း လမ်းဖယ်လိုက်ရသည်။ ထိုအခါ သပွတ်အူက ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ့အရှုပ်ဆုံးဆိုပြီး အပျော်ကြီးပျော်ကာ မြစ်အတွင်းတွင် ဆက်ပြီးမျှောလာခဲ့သည်။ လောကတွင် သူအရှုပ်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် မြစ်အတွင်းတွင် သူ့ကို လမ်းဖယ်ခိုင်းနိုင်မည့်သူ မရှိတော့ဟု တွေးထင်နေတုန်း သူ့ကို လမ်းဖယ်ခိုင်းသူ ပေါ်လာသည်။
ငါက သပွတ်အူ ကမ္ဘာမှာ အရှုပ်ဆုံးပဲ မင်းက ဘာမို့ ငါ့ကို လမ်းဖယ်ခိုင်းရတာလဲဟု မေးတော့
ငါက ဇာတ်သမားတွေ တင်လာတဲ့လှေ မင့်ထက် ပိုရှုပ်တယ်
အဲဒီတော့ သပွတ်အူလည်း လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ရတော့သည်။
ထိုပုံပြင်လေးကို ကျွန်တော် ငယ်စဉ်က ဆရာမသိင်္ခ၏ စာအုပ်တစ်အုပ်(ပုဂံသားမောင်ဘမော် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်) တွင်ဖတ်ဖူးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံပြင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ ဇာတ်သဘင်အသိုင်းဝိုင်းသည် တော်တော်ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး နိုင်သည်ကို ရည်ညွန်လိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးရင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် လူတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ချင်ကြတာလဲ ဟုမေးစရာရှိပေလိမ့်မည်။ ထိုအလုပ်ကို လုပ်နေသူများသည် မည်သည့်ရွယ်ရည်ချက်ဖြင့် လုပ်နေသည်ဖြစ်ပါစေ အားလုံးကတော့ တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းဖြေကြလိမ့်မည် ၀ါသနာကြောင့်။
လူတိုင်းသည် ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ ၀ါသနာကို ရူးသွပ်ကြသည်။ ၀ါသနာကို ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ကြသည်။ ထိုအခါတွင် ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယို အသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ၀င်တိုးရန် ပြင်ဆင်ကြတော့သည်။ ထိုသို့ ၀င်တိုးရာတွင် ယေကျာင်္းလေးများအတွက် ဘ၀ပျက်လောက်အောင် မဖြစ်သော်လည်း မိန်းကများအတွက်မှုက သရေတမျှားမျှားနှင့် လျှာတစ်လစ်တစ်လစ်ထွက်နေသော ကျားပါးစပ်နုတ်ခမ်းကို ဖြတ်လျှောက်ကာသွားကြသည်။ တံတားထိုး သွားမည်ဆိုပါက တံတားဈေးက ကြီးလှသည်။
တံတားထိုးစရာ ငွေကလည်းမရှိ ၀ါသနာကိုလည်း မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ သရေတမျှားမျှားနှင့် ကျားပါးစပ်ဝကို ဖြတ်လျှောက်ကာ သွားရပေလိမ့်မည်။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:44 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
GSM ဖုန်တွေမှာ MSG ပို့ဖို့ အခက်ခဲ ဖြစ်နေရင်
အခုရက်ပိုင်းမှာ GSM ဖုန်းတွေမှာ MSG ပို့ရတာ အခက်ခဲဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တခါတလေ တော်တော်နဲ့ မရောက်ဘူး။ တခါတလေဆို တော်တော်နဲ့ လုံးဝမထွက်ဘူး။
အဲလို ဖြစ်နေရင် ကိုယ်ပို့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်အရှေ့မှာ 09 ခံပြီး ပို့ရင်ရပါပြီ။ ဥပမာ ပြောရရင် များသောအားဖြင့် ဖုန်းမက်ဆေ့ ပို့မယ်ဆိုရင် 50 ****** ဆိုပြီး ပို့ဖြစ်ကြတာများပါတယ်။ အဲလိုပို့မဲ့နေရမှာ အရှေ့က 09 ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။ ကျွမ်းလို့တော့မဟုတ်ဘူး ဆက်သွယ်ရေးကို ဖုန်းဆက်မေးထားတာ အသေးစိတ်သိချင်ရင် MPT 01555476 ကိုဆက်ပြီးမေးလိုက်ပါ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:33 PM 1 ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကဲ မနက်ဖြန် ညနေ လာရှိုးတက်လမ်း ကားနဲ့ နောင်ချိုမြို့ကို သွားပါမယ်။
နောင်ချိုမြို့ပေါ်တော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ နောင်ချိုကနေ နောက်ထပ် 35 မိုင်လောက်
ဆက်သွားရတဲ့ ညောင်နီဆိုတဲ့ ရွာလေးပေါ့။ အဲဒီရွာမှာ သူငယ်ချင်းရဲ့ ညီမ
သိပ်တော့မကြာပါဘူး တနင်္လလာနေ့ဆိုရင် ပြန်ရောက်ပြီ။ လောလောဆယ် စီစဉ်ထားတာ
ကတော့ လက်ဖက်ခင်းတွေ သွားမယ်။ နာမည်ကျော် ဂုတ်ထိပ်တံတားကို သွားမယ်။
အပြန်မှာ ပြင်ဦးလွင်ကို ၀င်မယ်။ လာရှိုးအထိ တက်ဖို့တော့ အချိန်မရတော့ဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:46 PM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
Ultra Surf မပွင့်
Free Don မတက်
၀က်ပရောက်စီကနေ ကျော်ပြန်တော့ ဘလော့ဂ် ဖန်ရှင်တွေက မစုံ
အဲဒီတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မရေးပဲ ပစ်ထားလိုက်တာ တော်တော်ကြာသွားတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 1:42 PM2ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
Forever Sports Journal What is your Ethic
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားတဲ့ပုံကို Forever Sports Journal က ခပ်တည်တည်နဲ့ ယူသုံးထားတာပါ။ ကျွန်တော်ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီပုံတွေကို လမ်းဘေးမှာ ရိုက်သလို ချက်ခြင်းရိုက်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘရာဇီးအသင်း ဧရာဝတီသွားမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လိုက်ချင်လွန်းလို့ ဘော့လုံးအဖွဲ့ချုပ်ကို သွားပြောပါတယ်။ အဖွဲ့ချုပ်ကသူတို့ အစီစဉ် မဟုတ်ပါဘူး YMCA ရဲ့ အစီစဉ်ပါဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုက်ဖို့ရာ နှစ်ရက်လောက်ကြိုပြီး YMCA မှာပြောထားရပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းကို ထွက်မဲ့မနက်ရောက်တော့ မနက်အစောကြီးထပြီး ဟိုတယ်ရန်ကုန်အရှေ့မှာ ငုတ်တုတ်လေး ထိုင်စောင့်နေရပါတယ်။ ဟိုတယ်လုံခြုံရေးတွေက ဓာတ်ပုံသမားမို့ ပေးမ၀င်ဘူးဆိုလို့ပါ။ နောက်တော့ YMCA အဖွဲ့တွေလာပြန်တော့လည်း ကားကတစ်စီးတည်း ဖြစ်နေလို့ မဆံ့တော့ဘူးတဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာ မှတ်ရပ်ပြီး လိုက်ရလိုက်ရ လိုက်ရရင်ပြီးပါပြီ ဆိုပြီး အဲဒီခရီးစဉ်ကို လိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဆိုလိုချင်တာတော့ သူများဘက်က အဲလို ခဲရာခဲဆစ်ကြိုစားပြီး ရိုက်လာတဲ့ပုံတွေကို သူတို့က အကြောင်းမကြား ဘာမကြားနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ယူသုံးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဖောင်ပိတ်အမှီမို့လို့ ယူသုံးလိုက်တာ အကြောင်းမကြားဘူးပဲထား။ ပုံအောက်မှာတော့ ဘယ်သူ့ဆီကနေ ယူသုံးတယ်ဆိုမျိုးတော့ ထည့်သင့်ပါတယ်။ အခုတော့ မသိရင် သူ့ဖာသာ သူတို့ ရိုက်ထားတာလို လို ဘာလိုလိုနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ယူသုံးလိုက်တာ။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်မေးချင်တာက Forever Sports Journal ရဲ့ Ethic က ဘာလဲဆိုတာပါပဲ ။
မူရင်းပို့စ်ကို ဒီနေရာမှာကလစ်ခေါက်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 6:14 PM9ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က နှင်းဆီပန်းတစ်ပင်ကို စိုက်ဖူးသည်။ ထိုနှင်းဆီပင်လေးသည် ကျောင်းအနီးရှိ နှင်းဆီခြံတစ်ခြံမှ ပိုက်ဆံငါးဆယ်ဖြင့် ၀ယ်ယူလာခြင်းဖြစ်ပြီး ငွေငါးဆယ်ပေးရသော နှင်းဆီပင်လေးကို ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားသည်။ ထိုနှင်းဆီပင်လေးကို ကျွန်တော် မနက်တိုင်းရေ လောင်းသည်။ ထိုနှင်းဆီပင်လေးမှ နှင်းဆီပန်းလေးတစ်ပွင့် ပွင့်လာစေရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသော အိမ်မက်တွင် ထိုနှင်းဆီပင်လေးမှ နှင်းဆီပန်းလေး တစ်ပွင့်လာသည်။ အိပ်ရာမှ နိုးတော့ နှင်းဆီပင်လေးကို အပြေး အလွှားသွားကြည့်မိသည်။ နှင်းဆီပင်လေးမှ နှင်းဆီပန်း မပွင့်သေးပါ။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ နှင်းဆီပင်လေးမှ နှင်းဆီဖူးသေးသေး ထွက်လာသည်။ နေကြာစေ့ တစ်ဝက်စာလောက် ရှိသော ထိုနှင်းဆီဖူး သေးသေးလေးကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော် ပျော်၍မဆုံးပါ။ ထိုနှင်းဆီဖူးလေးသည် တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုပိုပြီးကြီးထွားလာသည်။ နှင်းဆီဖူးလေးကိုကြည့်ရင်း နှင်းဆီပင်လေးကို နေ့စဉ်ရေလောင်းရင်း နှင်းဆီဖူးမှ နှင်းဆီပွင့်လေးတစ်ပွင့် ပွင့်မည့်ရက်ကို ကျွန်တော် စောင့်မျှော်နေမိသည်။
ကျွန်တော်နှင်းဆီဖူးလေးကို ရေလောင်းသော်လည်း ကြီးလာခြင်းမရှိသည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ထိုကဲ့သို့ သတိထားမိပြီး သုံးလေးရက်အကြာတွင် နှင်းဆီရွက်လေးများ လိမ်တွန့်ကာ နှင်းဆီးဖူးလေးမှာလဲ အပေါက်လေးများ ဖြစ်လာသည်။ တစ်ပတ်လောက်နေတော့ နှင်းဆီပင်လေးသည် ငြိုးခြောက်သွားပြီး သေဆုံးသွားတော့သည်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်နှင်းဆီပင်ကို မစိုက်ဖြစ်တော့ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင် နှင်းဆီပွင့်လေးတွေကို လိုချင်တိုင်း သက်သောင့်သက်သာပင် ဈေးမှ ၀ယ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ဘ၀တွင် နှင်းဆီပန်းပွင့်များစွာကို ဈေးမှဝယ်ယူခဲ့ဖူးပါသည်။ ကျွန်တော် နှင်းဆီပန်းပွင့်သော နှင်းဆီပင်ကို ကျွန်တော် မြတ်နိုးပေမယ့် နှင်းဆီပင်တစ်ကို နှင်းဆီပန်းပွင့်လာ အောင်စိုက်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
တစ်ခုသော တစ်ရက်တွင် ကျွန်တော်နှင်းပန်းလေး တစ်ပွင့်ကိုဝယ်ပြီး ကျောင်းစာသင်ခန်းထဲက ပန်းအိုးတွင် ထိုးထားလိုက်သည်။ ညနေကျောင်းဆင်းတော့ ကျွန်တော့်ပန်းလေးကို တခြားကျောင်းသား တစ်ယောက်က ယူသွားသည်။ ကျွန်တော်သူ့လက်က နှင်းဆီပွင့်ကို မရမက ပြန်လုသည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်လုရင်း နှင်းဆီကဆူးတွေ ကျွန်တော့လက်ကို စူးကုန်သည်။
ဘ၀တွင် မည့်သည့်အခါတုန်းကမှ မျှော်လင့်ထားခဲ့ဖူးခြင်း မရှိသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ခါမှ မျှော်လင့်ထားခြင်း မရှိသည့်နေရာတွင် ဆုံဆည်းခဲ့သည်။ သူမသည် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ နှင်းဆီပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်။ ကျွန်တော်သည် သူမ၏ အချစ်ကို ရဖို့အတွက် နေ့စဉ်ကြိုးစားရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြိုးစားခြင်းသည် နှင်းဆီပင်လေးကို ရေလောင်းခြင်းလော။
အချိန်တွေ ကြာလာတာနှင့်အမျှ သူမနှင့်ကျွန်တော် ရင်းနှီးမှုတွေဆီကနေ တစ်ဆင့်ကူးလို့ သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသံယောဇဉ် ရိုးတန်းရှည်လေးမှ အချစ်နှင်းဆီပွင့်လေး ဘယ်နေ့ပွင့်မလဲ ဆိုသည့် မျှော်လင့်ဖြင့် ကျွန်တော်အချိန်များစွာ စောင့်စားနေခဲ့မိသည်။ အချိန်တွေတာ ကုန်လာသည်။ နှင်းဆီပွင့်လေး ပွင့်မလာခဲ့ပါ။
နှင်းဆီပွင့်လေး ပွင့်မလာပေမယ့် တစ်နေမှာ ပွင့်လာနိုးဆိုသည် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် သံယောဇဉ်ရိုးတန် ရှည်လေးကို ကျွန်တော် အချိန်အတော်ကြာ ဖက်တွယ်ထားမိသည်။ ရင်ဘတ်ကို စူးပြီး နှလုံးသားက သွေးတွေ ထွက်လာတော့မှ ကျွန်တော် သတိထားမိလိုက်သည်။ နှင်းဆီရိုးပဲ ဆူးတွေလည်း ပါမှာပေါ့လေ။
တကယ်တော့ လောကမှာ ပိုက်ဆံရှိရင် နှင်းဆီပန်းပွင့်တွေကို ကြိုက်သလောက် ဈေးမှာဝယ်လို့ရသည်။ ရည်းစားဆိုတာလဲ နှင်းဆီပန်းလိုဖြစ်သည်။ အချိန်ပေးနိုင်ရင် ပေးနိုင်သလောက် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ထားလို့ရသည်။ ဘ၀တွင် ကျွန်တော်နှင်းဆီပန်း မြောက်များစွာကို ဈေးမှ ၀ယ်ယူခဲ့ဖူးပါသည်။ ထို့အတူ ရည်းစားပေါင်းများစွာကိုလည်း ထားခဲ့ဖူးသည်။
ဒါပေမယ့် အချစ်ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော် မစိုက်ပျိုးနိုင်သေးတဲ့ နှင်းဆီပန်းလေးတစ်ပွင့်များ ဖြစ်နေမလား မသိ...
မှတ်ချက်၊ ၊ သစ္စာနီ၏ တောင်တန်းများ ၀တ္ထုတိုကို ဖတ်အပြီးတွင် နှင်းဆီကို ရေးခြင်းဖြစ်သည်
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 12:21 PM3ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
တခါတုန်းက သမီးယေက္ဖနှစ်ယောက်ဟာ ကဗျာတစ်ပုဒ်စီကို နှစ်ယောက်ဝိုင်းပြီး ရေးခဲ့ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒီဘလော့ဂ်ပို့ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို နှစ်ယောက် တစ်ပုဒ်လို့ ပေးထားတယ်။
ကျွန်တော့်ကမ္ဘာထဲမှာ မြူးထူးစွာ လွင့်မျောဖူးတယ်။
ကျွန်တော် အသက်ဆက်နေရခြင်းရဲ့ အကြောင်အရင်း။
ကျွန်တော့်ထံပါး ရစ်သီသီနဲ့ ပျံဝဲဖူးတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ မာကျောမှုတွေကို နူးညံ့စေခဲ့တယ်။
အခု ကျွန်တော်က ရိုးတံရှည်
ကျွန်တော့် လက်အစုံပေါ် ခိုနားဖူးတယ်။
ကျွန်တော့်စာမျက်နှာတွေပေါ် ပုံရိပ်တွေ ထားခဲ့တယ်။
တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ ငှက်ပျော်ခင်းတွေ ပျက်စီးခဲ့ဖူးတယ်
သူမကြောင့် လူတွေခဏခဏ ချော်လှဲကြရတယ်
မနိုင်မနင်းသူ့ဝိတ်ကြီးနဲ့ တက်လို့ သစ်ကိုင်းကျိုးကျခဲ့ရဖူးတယ်
သူကိုက်စားသွားလို့ နှလုံးသားတောင် တိုးလှိူပေါက်နေပြီ
ညီဖြစ်သူ ( ကဗျာရေးသူညီမ၏ ခင်ပွန်းလောင်း) ကပြန်ရေးသောကဗျာ
ငါ့မျက်နှာတွေပေါ်မှာ အချစ်တွေကို ဖော်ပြမထားဘူး
ဒါပေမယ့် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ အချစ်တွေရှိခဲ့တယ်
နင့်အတွက် လောကကြီးမှာနေရာလေးတစ်ခု ဖန်တီးမပေးနိုင်ဘူး
ဒါပေမယ့် ငါ့နှလုံးသားမှာတော့ နန်းတော်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်
တကယ်တေ့ ငါကနင့်ရဲ့အချစ်တွေကို မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ခြင်းတွေကို ငါပိုင်ဆိုင်တယ်
ငါ့မျက်နှာတွေပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေကို ဖော်ပြမထားဘူး
ဒါပေမယ့် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ၀ဲတွေရှိခဲ့တယ်
နင့်အတွက် လောကကြီးမှာ အိမ်သာလေးတစ်ခု ဖန်တီးမပေးနိုင်ဘူး
တကယ်တေ့ ငါကနင့်ရဲ့ နှာခေါင်းကို မပိုင်ဆိုင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် နှပ်ချေးတွေကို ငါပိုင်ဆိုင်တယ်
အဲဒီဠင်းတရုပ်ကြီးကို မှန်ကြည့်ရင်း ထွက်လာတဲ့ ၀ဲတွေကိုခံစားကုတ်ဖဲ့ရင်း
မိန်းကလေးရယ် ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီဠင်းတအိုကြီး ကိုရိုက်မောင်းမထုတ်ပါနဲ့နော်
ငါဆက်ပြီး လောက်သေတွေ စားပါရစေ။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:43 AM5ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 7:10 PM7ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
မနေ့ညက ဗိုင်းကျွန်တော့်ဂျီတော့ကို ဗိုင်းရပ်ထိသွားတယ်
Ripway ဗိုင်းရပ်ပဲ။ တစ်ယောက်ကနေ လာပို့တာ အဲဒီကောင်ကို ဘလော့ဂ်မလို့ လုပ်တာ မောက်ကစုတ်တော့ ဘလော့ဂ်တဲ့နေရာကို မရောက်ပဲ အဲဒီကောင်ကို ကလစ်ခေါက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီမှ သကောင့်သားက ကျွန်တော့်ဂျီတော့မှာ ရှိတဲ့လူတွေကို တန်းစီးပြီးပို့တော့တာပဲ။ တော်တော်စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဗိုင်းရပ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ ဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူး။ ပတ်စ၀ပ်တော့ ပြောင်းထားလိုက်ရတာ် နောက်တော့ဘာထပ်ဖြစ်ဦးမလဲ မသိဘူး။
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 8:29 AM4ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ
ရေးသားသူ စိုးဇေယျထွန်း ရေးသားချိန် 10:49 AM6ယောက်က ဒီလိုမြင်တယ် သင်ဘယ်လို မြင်သလဲ